(ယိုးဒယား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ထိုင်း (၇၅%)၊ တရုတ်(၁၄%)၊ အခြားလူမျိုး (၁၁%)
ထိုင်းနိုင်ငံအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ငြိမ်ဝပ်မှု အမျိုးသား ကောင်စီမှ အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘုရင်မင်းဆက်အား မဟာဝဇိရာလင်္ကရဏဘုရင်မှ ဦးဆောင် အုပ်ချုပ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ရာမ ၁၀ သို့မဟုတ် ချက်ကရီမင်းဆက်၏ ဒသမမြောက် ဘုရင် အဖြစ် အုပ်ချုပ်လျှက် ရှိသည်။ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်မှ စတင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ အမည်အား သယာမ်မှ ထိုင်းလန်း ဟု ပြောင်းလဲ ခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေးသည် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် ဘောင်အတွင်းမှ ကျင့်သုံးပြီး ဝန်ကြီးချုပ်သည် အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဆက်ခံသော ဘုရင်သည် နိုင်ငံ၏ ဉသျှောင်ဖြစ်သည်။ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍသည် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဥပဒေပြုရေးတို့မှ ကင်းလွတ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း တရားသူကြီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ လက်ရှိဥပဒေထက် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု သံသယရှိစရာ ဖြစ်သည်။ 
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင်များကို တိုင်းဒေသကြီးများ အနေနှင့် စီမံခန့်ခွဲသည်။ တိုင်းဒေသကြီး ၄ ခု အနေနှင့် ပိုင်းခြား ထားပြီး ၎င်းတို့မှာ ထိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ ထိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ ထိုင်းအလယ်ပိုင်း နှင့် ထိုင်းတောင်ပိုင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။
တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုစီတွင် ကွဲပြားခြားနားသော သမိုင်းနောက်ခံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာစကား နှင့် လူမျိုးများ ရှိသည်။
တိုင်းဒေသကြီး ၄ ခု အတွင်း နေထိုင်ကြသော ဒေသခံ ထိုင်းလူမျိုးများတို့သည် ဂျာမနီ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသများကို စီမံခန့်ခွဲပုံနှင့် ဗြိတိသျှတို့၏ စကော့တလန်နိုင်ငံ၊ ဝေလနိုင်ငံ နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့တွင် ကျင့်သုံးသော အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်သော စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ်များကို အားကျ အတုယူကြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် တိုင်းဒေသကြီးများ ခရိုင်များဖြင့် ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ထားသော်လည်း ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဒိစတြိတ်အကြီးအကဲ နှင့် ဒိစတြိတ်စာရေး စသည်များကို ဗဟိုအစိုးရမှ တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှု ကွဲပြားခြင်း လက္ခဏာရပ် မရှိဘဲ ပထဝီ၊ စာရင်းဇယား၊ ဘူမိဗေဒ၊ ရာသီဥတု နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း သဘောအရသာ ခွဲခြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး ၄ခု
↑ "Thailand's Junta Chief Chosen as Prime Minister"၊ Thailand News.Net၊ 21 August 2014။ 21 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Theraphan Luangthongkum (2007). "The Position of Non-Thai Languages in Thailand". ISEAS Publishing.
↑ Charles Eliot (1921). The Project Gutenberg EBook of Hinduism and Buddhism, An Historical Sketch, Vol.3(of 3) [EBook #16847]. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., Ch. xxxvii 1; citing in turn Footnote 189: The name is found on Champan inscriptions of 1050 CE and according to Gerini appears in Ptolemy's Samarade = Sâmaraṭṭha. See Gerini, Ptolemy, p. 170. But Samarade is near Bangkok and there can hardly have been Thais there in Ptolemy's time; and Footnote 190: So too in Central Asia Kustana appears to bealearned distortion of the name Khotan, made to give itameaning in Sanskrit.။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Some Aspects of Asian History and Culture by Upendra Thakur p.157
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Werner Gruhl, Imperial Japan's World War Two, 1931–1945, Transaction Publishers, 2007 ISBN 978-0-7658-0352-8
↑ Thanet Aphornsuvan, The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political History။ (152 KB), 2001 Symposium: Constitutions and Human Rights inaGlobal Age: An Asia Pacific perspective
↑ ၃၇.၀၀ ၃၇.၀၁ ၃၇.၀၂ ၃၇.၀၃ ၃၇.၀၄ ၃၇.၀၅ ၃၇.၀၆ ၃၇.၀၇ ၃၇.၀၈ ၃၇.၀၉ ၃၇.၁၀ ၃၇.၁၁ ၃၇.၁၂ ၃၇.၁၃ ၃၇.၁၄ ၃၇.၁၅ ၃၇.၁၆ ၃၇.၁၇ ၃၇.၁၈ ၃၇.၁၉ ၃၇.၂၀ The Climate of Thailand။ Thai Meteorological Department။ 18 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2016 Report။ Yale University။ 17 December 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ Thailand's Elephants။3March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၇.၀ ၄၇.၁ Draper, John (2012), "Revisiting English in Thailand", Asian EFL Journal (Asian EFL Journal) 14 (4): 9–38, ISSN 1738-1460
↑ OECD (2013), Structural Policy Country Notes: Thailand, OECD
↑ ၆၂.၀ ၆၂.၁ Production Statistics။ OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)။6November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၃.၀ ၆၃.၁ "Thailand's love affair with the pickup truck"၊ Nikkei Asian Review၊ 27 November 2014။4January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2014) Travel and Tourism, Economic Impact 2014: Thailand, 2014, London: World Travel & Tourism Council။ 10 March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "History"၊ TATnews.org၊ 2015။7May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၅.၀ ၇၅.၁ ၇၅.၂ ၇၅.၃ Henri Leturque and Steve Wiggins 2010. Thailand's progress in agriculture: Transition and sustained productivity growth. London: Overseas Development Institute
↑ ၇၉.၀ ၇၉.၁ International Index of Energy Security Risk။ Institute for 21st Century Energy (2013)။ 14 September 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၀.၀ ၈၀.၁ (2004) Ethnolinguistic Maps of Thailand (in Thai). Office of the National Culture Commission။ 8 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၂.၀ ၈၂.၁ (28 July 2011) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Reports submitted by States parties under article9of the Convention: Thailand (in English with appended Thai government translation). United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination။ 8 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၆.၀ ၈၆.၁ US Department of State, Thailand။ State.gov။ 25 April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Murray L Weidenbaum (1 January 1996). The Bamboo Network: How Expatriate Chinese Entrepreneurs are CreatingaNew Economic Superpower in Asia. Martin Kessler Books, Free Press, 4–8. ISBN 978-0-684-82289-1။
↑ Chang Thailand Slammers – AirAsia ASEAN Basketball League။ aseanbasketballleague.com။2June 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းနိုင်ငံ&oldid=539886" မှ ရယူရန်